Gabadha yaabka leh ee Zeineb, hooyadan haysata 3 caruur ah oo ka soo gudubtay albaabada ifocop si ay ugu tababarto horumarinta webka si ay u noqoto, wax ka yar hal sano, tababare iyo madax ganacsigeeda horumarinta Webka. Socdaal aan caadi ahayn oo hubaal ah in wax ka badan hal-abuuri doono!
Waxay yihiin saddex, qoyskiisa, si ay u doorteen ifocop maalin maalmaha ka mid ah si ay u bilaabaan jidka dib u tabobar xirfadeed: ina-adeerkii (tababarka xisaabaadka) inuu bilaabo; laakiin sidoo kale ninkeeda iyo walaalkeed, kuwaas oo rabay inay noqdaan horumariye web iyada ka hor. Markaa waa lama huraan, markii ay soo gashay, Saynab way garanaysay halka ay u socoto. Si kastaba ha ahaatee, taasi macnaheedu maaha inay u fududayd iyada. "Waa la ii digay, mana niyad jabin, koorsada ifocop-ka ee 8-bilood ah, ee la wadaagayo inta u dhaxaysa koorsooyinka iyo dhexgalka xirfadeed ee shirkad, waa… Waxay xasuusataa, iyadoo kalsooni ku qabta inay su'aalo waydiisay qaraabadeeda oo ay samaysay shaqo cilmi baaris oo damiir leh ka hor inta aysan saxiixin falkii ugu horeeyay ee dib u tababarkeeda.
"Gaar ahaan tan iyo saldhigga, waxaan hamiyey inaan naftayda ku tababaro sawirada shabakada, ma aha horumarinta iyo barnaamijyada", way qiratay. Waa maxay sababta, haddaba, isbeddelkan? Si fudud sababtoo ah way dhacday
Soo hel markhaatiga Zeineb, oo ah barta ifocop oo noqotay horumariyaha iyo maareeyaha ganacsiga. Oktoobar 24th, 2021Tranquillus
READ Aasaaska iibka
horeNoqo horumariyaha isku -dhafka webka oo leh ifocop
socdaMounir: "Tababarkani wuxuu ii metelayaa nooc ka mid ah guga"